Kuphi ukukhuphela iifonti zasimahla: iphepha apho unokuzifumana khona | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kuphi ukukhuphela iifonti zasimahla
Encarni Arcoya | | Imithombo
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye udibana nephepha lewebhu, intengiso, ibhena okanye isicatshulwa esithe satsala umdla wakho, hayi kakhulu ngenxa yento esiyibekileyo, kodwa ngenxa yefonti esetyenzisiweyo. Okanye yintoni efanayo, imithombo esetyenzisiweyo. Ukuba awazi kakuhle ukuba ungazikhuphela njani iifonti zasimahla, ngaphaya kwezo zichazwe kwangaphambili kwikhompyuter yakho, ke oku kuya kukunika umdla.
Kwaye ukuba nengqokelela elungileyo yeefonti kunokukunceda kuyilo lwakho loyilo. Kodwa sukucinga ukuba bonke bakhululekile; ngokucacileyo kuya kubakho iisayithi zokukhuphela iifonti zasimahla, kwaye ezinye kuya kufuneka zihlawulwe. Kunye neefonti onokuzisebenzisa ngaphandle kwengxaki kwinqanaba lomntu kunye nelorhwebo; kunye nezinye onokuzisebenzisa kuphela kwinqanaba lomntu. Ngaba siza kuthetha ngabo?
1 Yintoni umthombo?
2 Khuphela iifonti zasimahla: nakuphi na ukusetyenziswa?
3 Kuphi ukukhuphela iifonti zasimahla?
3.1 Imigca ye Google
3.3 Apho unokukhuphela iifonti zasimahla: Iifonti zasimahla eziyi-1001
3.5 Apho unokukhuphela iifonti zasimahla: Umgca wefonti
3.6 Uhlobo lwamagama
Iifonti zibhekisa koonobumba abasetyenziselwa ukwenza uyilo. Nokuba ibhanile, ilogo, i-imeyile okanye incwadi. Ngokwenyani, le nto uyifundayo ngoku iyahambelana nefonti.
Ungadibana ne iifonti zasimahla (njengalezo zingena kwiikhompyuter okanye ubhale ngazo kwiLizwi okanye iinkqubo ezifanayo); kunye nemithombo yentlawulo, apho kuya kufuneka uhlawule ukukhuphela ifayile ekuvumela ukuba usebenzise loo mthombo.
Uninzi lwabantu luphendla i-Intanethi malunga nendlela yokukhuphela iifonti zasimahla. Kodwa kukho inqaku elibalulekileyo elingathathelwa ngqalelo nelinokukufaka engxakini.
Khuphela iifonti zasimahla: nakuphi na ukusetyenziswa?
Khawufane ucinge ngezi meko zimbini:
Kwelinye icala, ufuna ukwenza ikholaji eneefoto zabantwana bakho kwaye ufuna ifonti efanelekileyo ukunika amandla okutshintsha okupheleleyo. Ufumana umthombo kwaye uyikhuphele ukuze uwusebenzise.
Kwelinye icala, wenza ikholaji efanayo kwinkampani kwaye ukhuphele ifonti efanelekileyo kwaye uyisebenzise ukubonisa uyilo.
A kuqala, omabini la matyala anokwenzeka. Kodwa kukho umahluko omncinci phakathi kwenye nenye. Ngelixa eyokuqala kukusetyenziswa ngasese nangobuqu; eyesibini yeyentengiso, Apho uthengisa khona umsebenzi wakho kwaye ngenxa yoko ukusetyenziswa kwalo mthombo. Kwaye kunokwenzeka? Kuxhomekeke.
Xa ukhuphela iifonti zasimahla, kuya kufuneka ukhumbule ukusetyenziswa oza kukunika. Kwaye kukuba, kumaphepha okukhuphela amaphepha, bayakuxwayisa ukuba ifonti inokusetyenziselwa ukuthengisa okanye ubuqu.
Zeziphi iintlobo zokusetyenziswa endinokukunika zona?
Ukusetyenziswa komntu. Kule meko, bayakuvumela ukuba usebenzise ifonti kuphela kwindalo yobuqu, Oko kukuthi, uyilo olwenzileyo kwaye awuyi kuhlawulisa, okanye ungathengisi ngalo kwabanye.
Ukusetyenziswa kwezorhwebo. Ungasebenzisa ifonti ukwenza uyilo lwakho kwaye uthengise iseti. Kule meko, ifonti kufuneka icacise ukuba ikhululekile nge-100% okanye ukuba ukusetyenziswa kwezorhwebo kwamkelwe.
Kwenzeka ntoni ukuba ndithatha ifonti yobuqu ndiyisebenzisela urhwebo? Ngokokuziphatha, wenza into engafanelekanga ukuba yenziwe. Kodwa kwakhona, ukuba umbhali uyakuqonda oku, unokukuxela ngokulula kwaye akunyanzele ukuba umhlawulele intlawulo yokusebenzisa kwakho imvelaphi yakhe xa bekuchaziwe ukuba ayinakusetyenziselwa urhwebo.
Ke ngoko, ingcebiso yethu kukuba, nanini na unako, unemithombo ekhululekileyo ye-100% ukuze ungabhideki phakathi kwezo zisetyenziselwa wena kunye nokuthengisa.
Kuphi ukukhuphela iifonti zasimahla?
Okokugqibela, siza kukushiya apha ngezantsi kwamanye amaphepha apho unokukhuphela iifonti zasimahla. Kuzo unokhetho olukhulu lweefonti, nangona kuya kufuneka ulumke malunga nosetyenziso oza kulunika lona.
Kwaye oko kula maphepha unokufumana iintlobo ezahlukeneyo zeefonti, ukusuka kwezo zikhululekileyo kwi-100% kwabanye onokuzisebenzisa kuphela kummandla wobuntu, kodwa hayi kwintengiso. Oko kukuthi, awunakho ukuzisebenzisa ukupapasha incwadi, iposta, kwiphepha lewebhu ...
Ukongeza, ezinye ezininzi zifuna imvume yabantu abazidalileyo.
Ngale nto icacileyo, amaphepha esiwacebisayo ngala alandelayo:
Kweli phepha uza kufumana iifonti zasimahla ezifundeka kakhulu kwaye zilula. Abanazo iifonti "zoqobo" okanye "zokuyila", okanye izikripthi, kodwa kufanelekile ukufumana ezinye zazo, ngakumbi kwizicatshulwa okanye iintloko.
UDafont unjalo Elinye lawona maphepha makhulu okufumana ileta ubukhangela, nokuba awucingi ukuba iyakubakho. Kwaye ineentlobo ezingaphezu kwama-8000 zeefonti, kwaye uninzi lwazo lukhululekile kulo naluphi na usetyenziso.
Apho unokukhuphela iifonti zasimahla: Iifonti zasimahla eziyi-1001
Kunye neyangaphambili, iFonti yasimahla ayi-1001 yenye yezona ndawo zidumileyo zabayili beengcali kunye neengcali kwiileta "kuba unokufumana yonke into ekuyo.
Kuyinyani ukuba ezinye iifonti kwabelwana ngazo namanye amaphepha, kodwa unokufumana iifonti ezizodwa oza kuzithanda.
I-behance yenye yeendawo ekumele ukuba wonke umyili wegraphic azi. Kwaye iyakwenza oko kuba kulapho abaqulunqi badibana khona kwi-intanethi. Kodwa, ukongeza ekubeni nakho ukubonisa umsebenzi wakho ngeenxa zonke, baninzi kakhulu abaxhoma iifonti zabo, kuba bayile zona; ngaphezulu, zikuvumela ukuba uzikhuphele kwaye uninzi zinelayisensi yokusebenzisa intengiso.
Kutheni le nto ucebisa oku kuwe? Ewe, kuba ngamanye amaxesha loo mithombo yolwazi ayifumaneki kwenye indawo kwaye unokuba ngoyena ndoqo kuyilo lwakho usebenzisa indalo ekungekho namnye umntu oyibonileyo.
Apho unokukhuphela iifonti zasimahla: Umgca wefonti
Kumlambo waseFont uza kufumana ifayile ye- ikhathalogu eyahlulwe ngemixholo. Ngale ndlela, iifonti oza kuzifumana ziya kusekelwa ekubhaleni ngesandla, kumnandi, kubuchwepheshe ... Kuya kufuneka ulumke kuba nangona ineefonti zasimahla, kukho nezinye ezihlawulwayo (kunye nezinye ezingavumeli ukuzisebenzisela iinjongo zorhwebo).
Oku ngokuqinisekileyo kukukhumbuza okuninzi ngeDafont, kwaye kujongeka ngathi yinto yayo, kodwa akunjalo. Uya kuba nesikhombisi esikwazi ukukhangela phakathi kweefonti ezininzi kwaye ufumane eyona uyithandayo. Kodwa, njengoko sikuxelela, jonga ukuba banelayisensi oyifunayo, ngakumbi ukuba zenzelwe iiprojekthi zorhwebo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Kuphi ukukhuphela iifonti zasimahla
Iitemplate ezingama-37 zasimahla zediploma
Ukuzoba njani iileta ze3D